Dhaqan iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeeynkaro | shumis.net
Home » galmada » Dhaqan iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeeynkaro
Dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeeynkaro waxaa waaye dhismaha iyo mohiimada ka mid eh aadaanka.
Wax akhlaaqda ama anshaxa la xiriira dareenka raga iyo dumarka waa wax la kala dhaxla. Sida caadiga ah dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro waxaa hogaamiyo dhaqanka iyo diinta.
Dhaqamada bandankood qoyska weyn ayaa xukuma. Tobanka sano ugu danbeeyey waxey Noorway noqotay bulsho ka kooban dhaqama badan. Markii ey dhaqanada isla kulmaan waxa arkeynaa midba midka kale tastuurkiisa iyo hiddaha iyo dhaqanka ey wataan.
Taas waxey la midtahay sida u kala duwantahy araktida dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro, waxa la oggol yahay iyo waxaan la oggoleen, kala nooca aragtida jinsiga (lab ama dheddig), waxayaabaha loo oggolyahay gabardhaha iyo waxa loo oggol yahay wiilasha.
Qaar badan ayaa u haystaan hiddo iyo dhaqan kooriimaddaa ku saabsan dareemaha raga iyo dumarka ka dhaxeenkaro in ey ku dhacaan meel gaar ayaga u ah, iyo qaar dareensan in taageeraan iskoolka ka soo qeebqaato mawduucaan.
Title: Dhaqan iyo dareenka raga iyo dumarka ka dhaxeeynkaro
Posted by galmada Net, Published at July 19, 2017 and have 0 comments